Maqaal Soo Dir | Dhamays Media Group
ku soo dhawow DHAMAYSNEWS.COM, kana mid noqo Saaxiibbada Ra’yigooda si Madax-bannaan aanu ugu baahinno Bogga Wararka iyo Aragtiyaha Bulshada ee DHAMAYS NEWS (Maqaalka aad Jeceshahay inaad Bulshada la wadaagto Halkan ku soo dir, ka dibna Akhriso, una Sheeg Saaxiibbadaa).
Akhriste, nala wadaag Maqaalka aad doonayso inaad Bulshada u bandhigto (Maqaalkaaga Waafaji Xeerarka Anshaxa Bulshada, Sida Diinta, Dhaqanka. noo soo dir Maqaal ama Aragtidaada oo ka fayow Aflagaadada Dad badan ama Qof gaar ah).
Foomka Hoose wuxuu u baahan yahay:
2.. Geli Emailkaaga
3: Ciwaanka Maqaalkaaga.
4. Qoraalka Maqaalka oo dhan.
5. Sawirrada Maqaalka Raacaya
6. Ka ka dib Taabo Summit.